ကလေးရဲ့Communication Skills ကို အားကောင်းစေဖို့ နည်းစနစ်များ - Chit MayMay
Home Child Teaching ကလေးရဲ့Communication Skills ကို အားကောင်းစေဖို့ နည်းစနစ်များ
ကလေးရဲ့Communication Skills ကို အားကောင်းစေဖို့ နည်းစနစ်များ
ဥပမာ- ၂နှစ်ကလေးတစ်ယောက်က သွားနာနေတယ် ဆိုပါစို့။ သူတို့က မိဘကို အသိပေးဖို့ကြိုးစားပေမယ့် သူတို့ရဲ့ စကားပြောစွမ်းရည်က မတိုးတတ်သေးဘူးဆိုရင် သူတို့ရဲ့ အသိပေးမှုက မအောင်မြင်နိုင်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ကလေးငယ်တွေရဲ့ စကားပြောဆိုမှုစွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးရမယ့် နည်းလမ်းတွေကို မေမေတို့ သိထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ကလေးက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှု အဆင့်တိုင်းကို အနည်းဆုံး ဘာသာစကားစွမ်းရည်နဲ့ မဖြတ်သန်းဘူးဆိုရင် သူတို့ရဲ့မိဘတွေ၊ သက်တူရွယ်တူတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြောတဲ့အခါ အခက်ခဲတွေ ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့သလို နာကျင်မှု ပြဿနာတစ်ခုခုရှိရင် ကောင်းစွာ ဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက် စိတ်ပျက်စရာတွေလည်း ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေ၊ ကျွန်မတို့ကလေးတွေမှာ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရမ်သမ်ရှိတယ်ဆိုတာ သတိရ ရပါမယ်။ဥပမာ- ၁နှစ်သားအရွယ်ကလေးကို ဝေါဟာရကြွယ်ဝဖို့ ကျွန်မတို့ မျှော်လင့်ထားလို့မရပါဘူး။
၁။ အရုပ်နှင့် ပစ္စည်းတွေ
ကစားစရာတွေနဲ့ အသုံးများတဲ့ ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ပုံပြင်တစ်ပုဒ်၊ ဓါတ်ပုံတွေ (သို့) ပန်းချီဆွဲထားတာတွေပါတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်က ကလေးတွေရဲ့ ဘာသာစကားဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုကို မြှင့်တင်ဖို့ အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။
၂။ ကလေးတွေရဲ့ အားထုတ်မှုကို အားပေးပါ
ကလေးတွေ နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါတိုင်း ဆုချတာတို့ အားပေးတာတို့ ပြုလုပ်ပေးရပါမယ်။ လှောင်ပြောင်မည့်အစား သူတို့အသံထွက် ကြိုးစားမှုလုပ်တဲ့အခါတိုင်းမှာချီးကျူးပေးရပါမယ်။
၃။ စံပြဖြစ်ခြင်းက ကလေးတွေရဲ့ ပြောဆိုဆက်သွယ်မှုစွမ်းရည်ကို ပိုခိုင်မာစေပါတယ်
ကလေးတွေအတွက် linguistic correction (ဘာသာဗေဒပြုပြင်မှု) နဲ့ language articulation (ဘာသာစကား ပီသမှု)ရဲ့ စံနမူနာ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ အဲဒီစံနမူနာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာက အမှန်လဲ? ဘာက အမှားလဲဆိုတာ သိစေဖို့ ကျွန်မတို့ဟာ ကလေးနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါမျိုးမှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြောသင့်ပါတယ်။
၄။ ဘာသာစကား လိုအပ်မှုကို မြှင့်တင်ပါ
ကလေးတွေကို ဘာသာစကားအသုံးပြုဖို့လည်း တိုက်တွန်းသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ- သူတို့ တစ်ခုခုလိုချင်တဲ့အခါမှာ လက်ညှိုးထိုးပြီး တောင်းတာမျိုးကို ခွင့်မပြုဘဲ ပါးစပ်ကပြောပြီး တောင်းတာမျိုးလုပ်ဖို့ အားပေးရပါမယ်။
ကလေးတွေဟာ နေ့တိုင်း စာနည်းနည်းစီ ဖတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်- ရုပ်ပုံတွေပါတဲ့ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်တွေ၊ စတိုရီတွေနဲ့ oral traditionတွေက ကလေးတွေရဲ့ ဘာသာစကားတိုးတတ်မှုကို လှုံ့ဆော်ဖို့ ကူညီပါတယ်။
၆။ လက်ဟန်ခြေဟန်၊ အမူအယာတွေကို အသုံးပြုပါ
ကလေးတွေရဲ့ ဘာသာစကားနှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံမှုစွမ်းရည် တိုးတတ်စေဖို့အတွက် ကလေးနဲ့ စကားပြောဆိုတဲ့အခါ အမူအယာသုံးပြီး ပြောဆိုတာမျိုး၊ ဖော်ပြတာမျိုး ပြုလုပ်ပေးပါ။
ကလေးတွေ တုန့်ပြန်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့အခါမျိုးမှာ ဘယ်လောက်ပဲ အခက်အခဲရှိသည်ဖြစ််စေ သူတို့ကို အချိန်ပေးရပါမယ်။ အရမ်းခက်ခဲနေရင်တောင် သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဖော်ပြရန် အားထုတ်မှုလုပ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
၈။ ကျွမ်းဝင်မှုရှိတဲ့ အသံတွေကို အသုံးပြုခြင်း
တံခါးဖွင့်သံ၊ ခွေးဟောင်သံ (သို့) တံခါးဘဲလ်မြည်သံ ကဲ့သို့သော ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့ ကြားနေကျ အသံလေးတွေကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒီအရာအားလုံးက သူတို့ရဲ့ အာရုံကိုဖမ်းစားပြီး အခြေခံအဆင့်မှာ သူတို့ရဲ့ communication skills ပေါ်မှာ အလုပ်ဖြစ်ဖို့ ကူညီပါလိမ့်မယ်။
၉။ ကလေးရဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံမှုစွမ်းရည်ကို အားကောင်းစေဖို့ တေးဂီတကို အသုံးပြုပါ
ကလေးတွေကို တေးဂီတ၊ တေးသီချင်းလေးတွေနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အောင် အားပေးပါ။ ကလေးတေးကဗျာလေးတွေကို အသုံးပြုခြင်းက ကလေးရဲ့ စကားပြောစွမ်းရည်ကို တိုးတတ်စေပါတယ်။
Previous articleကလေးတွေကို ဘယ်အသက်အရွယ်မှစပြီး စာဖတ်ခိုင်းမလဲ? သူတို့ကို ဘယ်လိုထောက်ပံ့ပေးမလဲ?
Next articleအဆိပ်အတောက်ဖြစ်ပြီး ကြိုးကိုင်လွန်းသော မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ လက္ခဏာ (6) ချက်